ကျန်စစ်မင်း၏ မေတ္တာ … | Layma's World
Filed under: Thinking from History |
« မန်းမှတ်တမ်း … ဆောင်းအိပ်မက် … »
သန့်ဇော်မင်း, on September 7, 2007 at 4:54 am said:
မပန်ပြောသလို လူတစ်ယောက်စီအတွက် အမှန်တရားတစ်ခုစီရှိတယ်.
အင်း.. အကုန်လုံး သူဟာနဲ့သူတော့ မှန်နေကြတာကြီးပဲနော်..
naing, on September 7, 2007 at 2:37 pm said:
Layma, on September 8, 2007 at 2:21 pm said:
အမှားဆိုတာ အများက လက်မခံလို့အမှားလို့ ပြောကြတာပါ…ကာယကံရှင်အတွက်တော့ မှန်ရင်မှန်နေမှာ…။
jerry, on September 10, 2007 at 10:32 am said:
အိမ်း ….. ပေါက် ပြီ ပေါက် ပြီ …. ၂၀၀ ဖိုး ….. အဟဲ
“ပြည်သူတွေကျေနပ်မှ… စည်းလုံးမယ် … စည်းလုံးမှညီညွတ်မယ် … ညီညွတ်မှ သွေးညှီနံ့ ကင်းမယ် … သွေးညှီနံ့ ကင်းမှ ပြည်သာမယ် … ပြည်သာမှ ညီညာမယ် …”
“ပြည်သူတွေ ကြားက အမုန်းမီးတွေကို ငြိမ်းသတ်နေရလို့… တိုင်းပြည် တိုးတက်မှု နှောင့်နှေးမှာကို စိုးရိမ်တာ…”
ဂလိုကိုး ကျန်စစ်မင်းကြီးက ….. ကွာပါ့နော် ကွာပါ့ …… အပုံကြီးကိုကွာတာ …. ခုများတော့ ကွယ်
ငါတို့ ကြက်ဖနိုင်နိုင် cygnus စီးလို့ ဟန်းဖုန်းကိုင်
နင်တို့ကြက်ဖ ရှုံး ရှုံး ……… ဟေ့ ကြာတယ်ကွာ ဆွဲ…… ဆွဲ …. ကားပေါ်ဆွဲတင် #%^@&*$+\_!
ဟီး ….. ပြန်မတိုင်နဲ့နော်
Layma, on September 11, 2007 at 8:29 am said:
ဟဲ့..ဟဲ့…ကြက်ဖလာမခွပ်နဲ့ လေ … နာ့ဘလော့ နာသွားဦးမယ်…။